weel leydi ah
weel laba-laab ah
weel dhowr qaybood ah
weel nooca Ameerikaanka ah
Weelka koobabka badan ee wareegsan
Jumlada la tuuri karo Nooca Ameerikaanka ee Caagagga
Sanduuqa Qadada Caaga ah ee dib loo isticmaali karo oo tayadiisu sareyso...
Jumlo Microwaveable Ka Qaada Caag La Tuuri karo...
Microwave nadiif ah oo la tuuri karo PP caaga ah ee wareega cuntada
Qaadashada Multi-C ee Tayada Sare ee Jumladda
Koob Suugo ah oo daah-furan oo jumlo ah PP caag ah oo la tuuri karo...
Kaydinta PP-Jumlada ee La Tuuri karo ee Raashinka tubbada Wareegga Caaga ah ee Daboolka leh
Horumarka warshadaynta qaadashada, dad aad u tiro badan ayaa xaqiiqsaday muhiimada heerka cuntada weel caag ah oo la tuuri karo oo dabool leh. Dooro habab kala duwan oo weelasha cuntada ah iyadoo loo eegayo cuntooyinka kala duwan. Marka la barbar dhigo weelka wareega ee caadiga ah, weelashayada caagagga ah ee wareegsan waxay leeyihiin mug aad u weyn, waxayna ka samaysan yihiin walxo PP ah oo heer cunto ah, taas oo deegaan ahaan u wanaagsan oo ammaan ah. Dhanka kale, waxa ay leedahay wax qabad aad u fiican oo ah dheecaan-ka-baxsan waxayna u fududahay in la isku dhufto inta lagu jiro gaadiidka, iyada oo aan la jarin iyo daadinta biyaha. Weelka caagga ah ee heerka cuntada la tuuri karo ayaa u oggolaanaya ganacsiyada, qaybinta iyo macaamiisha inay yeeshaan waayo-aragnimo aad u wanaagsan, waa doorashada ugu fiican ee warshadaha qaadashada!
Jumlada la Tuuri karo Wareega Wareega ee Qaadka Qadada Bento oo leh 3-comp & 4-comp Weel cunto
Weelka qadada caaga ah ee bento waa mid ka mid ah doorashooyinka ugu fiican ee weelasha cuntada la qaadanayo ee dhamaadka-sare ah. Naqshadaynta 3-comp iyo 4-comp waxay u oggolaanaysaa weelka qadada caagga ah ee bento in ay si macquul ah u qaybiso cuntada oo ay uga hortagto faragelinta dhadhanka kala duwan ee qaybaha kala duwan. Weelka cuntada ee caaga ah ee qadada ayaa laga sameeyay PP-cunto waxaana la mariyaa hab-lakab-lakab ah si ay alaabta uga dhigto mid adag in la jebiyo, u adkaysato, iyo tan ugu fiican marka la eego ka hortagga daadinta. Waxay yaraynaysaa dhib badan inta lagu jiro gaadiidka waxayna siisaa macaamiisha khibrad qaadashada aad u weyn.
Koonteennarada Qaybaha Badan ee Tayada Sare ee Jumlada laga qaadan karo
Weelasha ka kooban qaybo badan ayaa caan ku ah kaydinta cuntada ama baakadaha cuntada ee Koonfur-bari Aasiya iyo suuqa Bariga Dhexe. Naqshaduhu wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku kaydinno cuntooyinka kala duwan qaybo kala duwan inta lagu jiro habka baakooyinka. Waxqabadka xidhidhiyaha heer sare ah ayaa hubiya in aanu jirin wax dareere ah, kaas oo nagu habboon in aanu qaadno oo aanu xidhno. Weelka qolal badan ayaa laga sameeyay cirbadeynta PP, waxay ku habboon tahay heerkulka -20 ° C ilaa +110 ° C sidoo kale, Wax dhib ah oo lagu kaydiyo qaboojiyaha, ama si toos ah loo kululeeyo foornada microwave, weelkayaga qolalka badan ayaa noqon doona midka ugu fiican. doorasho.
Nooca Ameerikaanka ah ee la tuuri karo Jumlada Weel Cunno Caag ah oo dabool leh
Weelka lagu kaydiyo cuntada ama baakadaha cuntada, weelka cuntada ee nooca Ameerikaanka ah ee daboolka qubbada leh waa mid ka mid ah weelasha cuntada ee ay dad badani jecel yihiin. Daboolka qubbada wuxuu ka dhigayaa weelka mug ka weyn weelka cuntada caadiga ah, naqshadda jeexdin ee gaarka ah ee daboolka sare waxay u oggolaaneysaa sanduuqa qubbada qaabaysan inuusan si sahal ah u simbiriirixan inta lagu jiro hawlgallo is-dul-saar badan. Weelka dufanka leh ee daboolka qubbada leh ayaa leh adayg aad u wanaagsan, ma fududa in la jebiyo, oo waxay leedahay dabool aad u fiican iyo daadinta biyaha. Sanduuqa wareega wareega ee daboolka qubbada ayaa sidoo kale si toos ah loogu kululayn karaa microwave, kaas oo ku haboonaan kara goobta nolosheenna guud ee nolol maalmeedka.
Weelka leydiga ee la qaadan karo Microwavable
Weelasha leydi-xagalka ah waa mid ka mid ah weelasha cuntada ee ugu caansan ee lagu kaydiyo ama lagu baakadeeyo cuntada. Oo waxay leeyihiin qaabab aad u fudud iyo awood weyn oo gudaha ah. Weelasha leydi-xagalka ah ayaa diyaar u ah tilmaamo kala duwan. Macaamiishu waxay dooran karaan tilmaamo ku habboon hadba baahidooda. Weelasha leydigu waxay fadhiyaan boosas yar inta lagu jiro codsiga iyo meelaynta, aad u nadiifsan oo aad u qurux badan. Waxay ku habboon yihiin heerkulka -20 ° C ilaa 110 ° C, markaa waxaa lagu dhejin karaa microwave ama qaboojiyaha, taas oo noo sahlaysa inaan kaydinno cuntada. Weelasha leydi-geeska ah kaliya maaha kuwa u adkaysta shoogga laakiin sidoo kale ceymiska, taas oo ku abuurta ku habboonaansho weyn qaadashada maalinlaha ah.
Sanduuqa Qadada Caaga ah ee Dib loo isticmaali karo oo Tayada Sare leh
Weelasha baastada ayaa ah alaabtayada cusub, baasto waxa lagu kaydin doonaa lakabka dhexe ( saxaarad baasto ah), oo laga soocaa maraq baaquli ku jira. Dhanka kale, iyadoo ay ugu wacan tahay waxqabadka cidhiidhiga aadka u wanaagsan, daboolka iyo maddiibadu ma daadin, waxaad kaliya ka furi kartaa daboolka aagga sacabka, darbiga dhumucdiisuna wuxuu ka dhigayaa qaab-dhismeedka weelka mid aad u xoog badan. si la mid ah alaabtayada kale, waxay ku habboon tahay iska caabin heerkul sare ah +110 ° C iyo iska caabbinta heerkulka hooseeya ee -20 ° C. Waxaa loo isticmaali karaa cunto karinta microwave iyo qaboojiyaha ilaalinta cuntada iyo qaboojiyaha.
#26 Jidka Tianhaidao, Aagga Horumarinta Dhaqaalaha ee Jinghai Tianjin City, Shiinaha, 301600